Otu esi etinye ihe nchọgharị Chromium na Fedora 35 - LinuxCapable
November 13, 2021 November 12, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Chromium na DNF
Usoro 2 – Wụnye Chromium na Flatpak
Ụzọ 3. Wụnye Chromium na Snap (Snapcraft)
Otu esi eweghachi ihe nchọgharị Chromium
chromium bụ ihe nchọgharị mepere emepe nke na-achọ iwulite ụzọ nchekwa, ngwa ngwa na kwụsie ike maka ndị ọrụ niile ga-enweta webụ. Nke chromium A na-eji codebase eme ihe n'ọtụtụ ebe. Microsoft Edge, Opera, na ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ dabere na koodu ahụ.
N'ime ntuziaka na-esonụ, ị ga-ama otu esi etinye ihe nchọgharị Weebụ Chromium na desktọpụ arụ ọrụ Fedora 35 gị.
Nkuzi a ga na-eji ọdụ ọdụ, nke a nwere ike ịhụ na ngwa ihe ngosi gị.
Nhọrọ nke mbụ bụ iji ebe nchekwa Fedora. Nke a bụ ụzọ akwadoro iji wụnye Chromium Browser maka ndị ọrụ Fedora site na iji njikwa ngwugwu DNF.
Na njedebe gị, jiri ihe ndị a dnf tinye iwu:
Iji kwado ụdị arụnyere, jiri iwu a.
A na-eji ọkọlọtọ edozi mmelite Chromium dnf kwalite - nweta ume iwu.
Ọ bụrụ na ị chọghị ka etinye Chromium na usoro DNF, jiri iwu na-esonụ wepụ ngwugwu ahụ.
Nhọrọ nke abụọ bụ iji njikwa ngwugwu Flatpak. Ekwesịrị ịwụnye Flatpak na sistemụ arụmọrụ Fedora gị ọ gwụla ma ewepụrụ ya.
Nke mbụ, wụnye ngwugwu Flatpak ma ọ bụrụ na ọ na-efu.
Na-esote, ịkwesịrị ịme ka Flatpack jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
Ugbu a tinye Chromium site na iji iwu flatpak na-esote.
Mgbe ụfọdụ akara ngosi ngwa enweghị ike ịpụta. Ị nwere ike ịbanye na pụọ ​​na nnọkọ gị ma ọ bụ jiri iwu njedebe na-esonụ.
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị ka ihe dị ka nkeji iri banye.
Iji wepu ụdị Flatpack nke Chromium, mee iwu a:
Pịnye Y Ọzọkwa Tinye igodo iji usoro Flatpak gaa n'ihu na iwepụ Chromium.
Na-esote, tinye ngwungwu Chromium site na iji snap:
Dịka n'elu, nke a na-agwa gị na arụnyere ihe nchọgharị Chromium nke ọma yana nọmba ụdị. Uru nke iji Snap iji wụnye Chromium bụ na ọ ga-abụ ụdị emelitere kacha atụnyere ebe nchekwa Flatpak na Fedora.
Ị ga-amalitegharị nnọkọ gị ma ọ bụrụ na akara ngosi ngwa ngosi efu!
Mara, ọ bụrụ na akara ngosi gị adịghị efu, leghara nke dị n'elu anya iwu.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Chromium, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Ugbu a ị tinyela ihe nchọgharị Chromium, enwere ike ịme mmalite n'ụzọ ole na ole.
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmalite Chromium wee jiri ọnụ, ziga ya na ndabere:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Ihe nchọgharị webụ Chromium. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepee Chromium, ibe mbụ ya ga-ekele gị.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ịwụnye ihe nchọgharị weebụ Chromium na Fedora 35 n'ụzọ atọ dị iche iche wee wepụ ngwugwu ahụ ma ọ bụrụ na achọghịzi ya.
N'ozuzu, Chromium Browser bụ nhọrọ mepere emepe magburu onwe ya nke na-enye ohere nkesa Linux nke chọrọ sọftụwia mepere emepe ka ọ kwado ihe nchọgharị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Chrome. Ndị na-ekesa Linux nwekwara ike iji Chromium dị ka ihe nchọgharị weebụ ndabara n'ọnọdụ Firefox.
Categories Fedora Tags Chromium Nchọgharị, Fedora 35 Mail igodo
Otu esi etinye Spotify na Debian 11 Bullseye